Fomba iray hampitana vaovao ho an’ny olona sasany ny tambazotra facebook. Nalaza omaly teo amin’io tambazotra io ny filazan’i Big Mj sy Arnaah fa hisaraka izy ireo. Namoaka izany ny pejy facebook an’i Big Mj …Tohiny
Rivodoza AVA : Efa nahazo loza fanairana Analamanga
Miha matanjaka hatrany ny herin’ny rivodoza AVA. Tamin’ny 3ora tolakandro, omaly, tany amin’ny 220km Avaratra atsinanan’i Toamasina no nisy azy. Nitombo hery izy ka lasa 105 km isan’ora ny rivotra entiny, ary tafiotra 140 km …Tohiny
Vao niandoha ny taona, dia efa nitondra vokatra tsara ho amin’ny fampanjakana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Jiolahy miisa 14, nivondrona tao anatina tambazotra iray efa tena matanjaka, ary mpanao fanafihana …Tohiny